Raysalwasaare Kheyre oo habeenkii xalay ka yaabsadey qaar ka mid ah dad Muqdisho-VIDEO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Raysalwasaare Kheyre oo habeenkii xalay ka yaabsadey qaar ka mid ah dad Muqdisho-VIDEO
Raysalwasaare Kheyre oo habeenkii xalay ka yaabsadey qaar ka mid ah dad Muqdisho-VIDEO
June 18, 2017 - By: HORSEED STAFF
Raysalwasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa habeenkii xalay ee Sabtida kormeeray in badan oo kamid ah xaafadaha Muqdisho. Xasan Cali Kheyre waxaa booqashadiisa ku weheliyey Wasiirka Amniga gudaha iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda.
Raysalwasaaraha waxaa istaajiyey qaar kamid ah ciidanka ilaalada ka hayey isgoysyada, waxa uu ka dhegaystey warbixino la xiriira amniga magaalada, waxaana uu abaal marin guddoonsiiyey askarta ilaalada haysey.
Raysalwasaraaha ayaa isgoyska Tarabuunka dhalinyaro ciyaarta kibriidka ku ciyaarayey la fariistey oo la ciyaarey isaga oo dhulka fariistey, waxaana uu dhalinyarada ka waraystey xaaladda nabadda, iyo hgawlgalada socda, dhalinyarada ayaa si weyn ugu farxay in Raysalwasaare Soomaaliyeed la fariisto lana ciyaaro.
Mudane Kheyre ayaa sidoo kale Isgoyska Sanca waxa uu kula kulmey dhalinyaro kubad ciyaaraysa kuwaas oo si weyn ugu farxay booqashada Raysalwasaare Kheyre, waxaana uu ka waraystey wada shaqeynta ay la leeyihiin ciidanka xasilinta Muqdisho, sida ay u arkaan xaaladda socota iyo waxyaabo kale.
Booqashada Rayslawasaaraha ayaa la dhihi karaa waxay ahayd mid uu ku dhiirigelinaayey nabadda Muqdisho iyox asilinta isla amrkaana ugu kuurgalayey waxa habeenkii ka socda Mqudisho.
Xasan Cali Kheyre Raysalwasaaraha xukuumadda federaaliga ah ayaa muddo dheer ka soo shaqeeyey arrimaha bini’aadanimada iyo gar-gaarka, waxaana uu khibrad dheer u lee yahay la shaqeynta dadka nugul iyo dhacabka caadiga ah.